प्रतिमहिना कम्तीमा ४ करोड कर छल्छ डिस होम, हेर्नुस् हिसाबकिताब – Rajmarg Online
व्यवसायी चन्द्र ढकालले अगुवाइ गर्ने आइएमई ग्रुपको वर्चस्व रहेको डिस मिडिया नेटवर्क (डिस होम) ले मनपरी ढंगमा ग्राहक संख्याको विवरण तयार पार्छ भन्ने तथ्य त यसअघि नै स्थापित भइसकेको छ।
ग्राहक संख्या खुलस्त नपार्नु, पब्लिक कम्पनीले आफ्नो विवरण सार्वजनिक नगर्नु र नियामक निकायसँग पनि डिस होमको तथ्यांक अद्यावधिक नहुनु आफैमा कर छलीका प्रमाण हुन्।
हामीले यो शृंखलामा यही प्रश्नको जवाफ खोज्ने जमर्को गरेका छौं।
रिपोर्टिङका क्रममा डिस होमले कति कर बुझाएको रहेछ भन्ने विवरण हात पार्न सजिलो थिएन। किनभने, राजनीति र प्रशासनलाई प्रभावमा पार्ने व्यवसायी चन्द्र ढकालको व्यापारिक घरानासँग जोडिएको विषय थियो यो।
हामी ठूला करदाता कार्यालयको गोलचक्करमा थियौं। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले डिस होमले बुझाएको करको पछिल्लो विवरण हात पार्‍यौं।
नेपालको सबैभन्दा पुरानो र बढी बजार हिस्सा ओगटेको डिस होमले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो ४ महिनामा जम्मा ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्रै कर तिरेको रहेछ।
यो हिसाबले डिस होमले महिनामा सरदर १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र कर बुझाउँछ।
फेरि अहम् प्रश्न उठ्छ, डिसहोमले बुझाएको यो कर सही हो कि होइन? कर छल्यो भने कसरी छल्यो?
अब यसको लेखाजोखा यसरी गरौं–
डिस होम, जसले ग्राहक संख्या लुकाउँदै आए पनि कुल बजारको २५ प्रतिशत हिस्सा दाबी गर्दै आइरहेको छ। डिस होमका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यले नेपाल लाइभसँग भनेका थिए, ‘हामी ग्राहक संख्या भन्दैनौं तर हाम्रो २५ प्रतिशत बजार छ।’
२५ प्रतिशत बजार भनेको कति हो?
नेपालमा टेलिभिजन उपभोक्ताको यकिन तथ्यांक न त सञ्चार मन्त्रालयसँग छ न त अर्थसँग। तर सेवा प्रदायक कम्पनीहरुका अरु कर्मचारी मात्र होइन स्वयं डिस होममै कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार नेपालमा कम्तीमा पनि ६० लाख टेलिभिजन उपभोक्ताहरु छन्।
६० लाख उपभोक्तालाई मानक मान्ने हो भने डिस होम आफैंले भनेको २५ प्रतिशत बजार बराबर १५ लाख ग्राहक उसको हिस्सामा पर्छन्।
१५ लाख ग्राहकको कुरा एक ठाउँमा होला।
मानौं, डिस होमका कम्तीमा १० लाख सक्रिय ग्राहक छन्। यसैका आधारमा अब करको लेखाजोखा गरौं।
सक्रिय १० लाख ग्राहकबाट डिस होम मिडिया नेटवर्कले न्यूनतम महिनाको ४ सय रुपैयाँ संकलन गर्छ। ४ सय रुपैयाँको १३ प्रतिशतका दरले १० लाख ग्राहकबाट उठाएको रकम मात्रै २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ। तर, ४ महिनामा डिस होमले ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्रै कर तिरेको ठूला करदाता कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।
सामान्य हिसाबमा मात्रै डिस होमले ४ महिनामै कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको कार्यालयकै विवरणबाट पुष्टि हुन्छ।
छली कसरी गर्छ डिस होमले? हेर्नुस् तथ्य
डिस होमले ग्राहकबाट असुल्ने न्यूनतम रकम ४ सय भन्नुको आधार डिस होमले सेवा विस्तारमा ल्याएका विभिन्न नामका १० वटा प्याकेज हुन्। यही प्याकेज अनुसार सेवा लिने ग्राहक संख्यालार्इ हामीले करको हिसाबकिताबको आधार मानेका हौं।
तर, तालुकदार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कर कार्यालयले भने डिस होमको ग्राहक संख्या सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। डिस होमले भने आफूखुसी ग्राहक संख्या बताउँदै कर तिर्दै आएको छ।
डिस होमले अहिले स्टान्डर्ड डेफिनेसन अन्तर्गत ६ वटा र एचडी अन्तर्गत ४ वटा गरी १० वटा प्याकेजमा ग्राहक बनाइरहेको छ।
स्टान्डर्ड डेफिनेसन प्याकेजअन्तर्गत बेसिक प्याकको मासिक ३ सय ५०, बेसिक प्लसको मासिक ४ सय २५ रुपैयाँ र डिलक्सको मासिक ५ सय रुपैयाँ लिँदै आइरहेको छ। यसमा ३ वटासम्म सेटअप बक्स जडानबाहेक अर्को सेटअप बक्स राखिएमा प्रति सेटअप बक्स २ सय रुपैयाँ ग्राहकले थप्नुपर्छ।
डिलक्स प्लसको प्याकेज लिने ग्राहकले पनि प्रतिमहिना ५ सय ७५ रुपैयाँ, मिडियम प्लसको ४ सय ७५ रुपैयाँ र मिडियमको ४ सय रुपैयाँ ग्राहकले प्रतिमहिना तिर्नुपर्छ।
यसैगरी, डिस होमले एचडी प्याकेज अन्तर्गतको ‘लाइफ स्टाइल प्याक’मा बढीमा ४ वटा सेटअप बक्स जडान गर्न मिल्ने गरी पहिलोमा ९ सय रुपैयाँ र थप ३ का लागि प्रति सेटअप बक्स १ सय रुपैयाँ लगाउँछ।
एचडी प्याकेजकै प्रिमियम एचडीमा ६ सय र प्रति थप ३ वटा टिभीमा प्रतिमहिना २ सय रुपैयाँ डिस होमले असुल्दै आइरहेको छ। साथै एचडी प्याकेजकै सुपर एचडी प्लस प्याकको ५ सय ७५ र सुपर एचडीको ५ सय ७५ रुपैयाँ प्रतिमहिना शुल्क छ।
यसरी मासिक प्याक अनुसार रकम असुली गर्नुपूर्व डिस होमले छाता र सेटअप बक्स चलाउन आवश्यक उपकरणको ३ हजार र जडानबापत ५ सय रुपैयाँ लिँदै आएको छ। एउटै छाताबाट ३ र ४ वटा सेटअप बक्स चलाउन मिल्ने प्याकेजमा पनि प्रति सेटअप बक्स २ हजार रुपैयाँ लिइन्छ।
सेटअप बक्सको विषयलाई छोड्दा पनि डिस होमले सरदर एउटा ग्राहकसँग मासिक ४ सय रुपैयाँभन्दा बढी लिने यही हिसाबकिताबले प्रस्ट पार्छ।
यसरी मासिक ग्राहकसँग लिने ४ सय रुपैयाँको १३ प्रतिशत रकम कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। कानुन अनुसार ४ सय रुपैयाँको १३ प्रतिशत रकम सरकारलाई तिरेर बाँकी रहेको रकममा पनि कम्पनीले सरकारलाई २ प्रतिशत रकम फेरि रोयल्टी तिर्नुपर्छ।
यसरी सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर र रोयल्टी रकम छलीकै लागि डिस होमले आफ्नो ग्राहक संख्या लुकाउँदै आफूखुसी रकम तिर्दै आएको छ।
९ वर्षदेखि रकम छली गर्दै आएको डिस होमको विषयमा तालुकदार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय बेखबर छन्।
माथि उल्लेख गरिएको तथ्यलाई आधार मान्दै प्रतिग्राहक ४ सय रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा पनि चालु आवको साउनदेखि कात्तिकसम्म डिस होमले २० करोडभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर, डिस होम मिडियाले ग्राहक संख्या अति नै न्यून देखाउँदै ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्रै कर तिरेको छ। डिसहोम मिडियाले तिरेको कर रकमको आधार मान्दा उसले नियमक निकायमा आफ्नो ग्राहक संख्या २ लाख ६० हजारको हाराहारीमा मात्रै देखाएको प्रस्ट हुन्छ।
के ९ वर्षदेखि डिजिटल टिभी (पे-टिभी) जडान गर्दै आएको डिस होम मिडियाको ग्राहक संख्या जम्मा २ लाख ६० हजार मात्रै रहेको विश्वास गर्न सकिन्छ? के, २५ प्रतिशत बजार हिस्सा भनेको जम्मा २ लाख ६० हजार ग्राहक हुन्?
साभार (नेपाल लाइभ)